चितवनमा ६७ जना एचआईभी संक्रमित थपिए, १६ जनाले ज्यान गुमाए «
भरतपुर-चितवनमा यो वर्ष ६७ जना एचआईभी संक्रमित फेला परेका छन् । भरतपुर अस्पतालको एआरटी सेन्टरमा सन् २०२० को १० महिनामा ६ हजार ७ सय ६ जनाको परीक्षण गर्दा ६७ जना नयाँ बिरामी फेला परेका हुन् । चितवनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या १ हजार ८ सय ९३ जना छन् ।
यही अवधिमा एचआईभी विरुद्धको औषधि सुरु गर्ने बिरामी १ सय १६ जना छन् । ४० जना अन्य जिल्लाबाट स्थानान्तरण भएका हुन् । एआरभी औषधि खाने कुल बिरामीको संख्या ९ सय छ । एचआईभी संक्रमित भइसकेपछि भाइरस फैलिन नदिन नियमित ‘एआरभी’ औषधि दिने गरिन्छ । एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेसन (ए एचएफ) नेपालको भरतपुर अस्पतालमा सञ्चालित परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार १० महिनामा १६ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा १० पुरुष, ६ महिला छन् । एक जना संक्रमितको कोरोनाका कारण ज्यान गएको थियो । सापकोटाले १० महिनामा ६ सय ९३ जनाको भाइरल लोड परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ५ सय ४४ जनाको परीक्षण लडाउनकै बेलामा गरिएको थियो ।
एआरभी औषधि लिन सुरु भएको १ वर्षपछि र त्यसपछिको हरेक ६ महिनामा भाइरल लोड परीक्षण गर्नुपर्छ । भरतपुर अस्पताल एआरटी सेन्टरका स्रोत व्यक्ति डा. युवानिधि बसौलाले लकडाउनका बेलासमेत संक्रमितलाई घरदैलोमै पुगेर एआरटी सेवा दिइएको बताए । उनका अनुसार १ हजार १ सय ४४ जनाको घरमै पुगेर सेवा दिइएको बताए । एआरभी औषधि, मास्क, स्यानिटाइजर, पोषण लिएर स्वयमसेवक घरदैलोमै पुगेका थिए । १२ जनाले एआरभी औषधि लिनै छाडेको बताए । चितवनमा ८ जिल्लाका संक्रमितले एआरटी सेवा लिने गर्छन् । भरतपुर अस्पतालका कोभिड क्लिनिकल संयोजक डा. प्रमोद पौडेलले एचआईभी संक्रमित कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेकाले नियमित एआरभी औषधि लिन र नियमित चेकजाँच गर्न आग्रह गरे । चितवनमा ३ जना एचआइभी संक्रमितलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. जगन्नाथ तिवारीले एचआईभी संक्रमित पहिचान तथा उपचारलाई अस्पतालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले चितवनमै भाइरल लोड परीक्षण गर्ने मेसिन ल्याउन पहल गरिने बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले चितवनका २५ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट एचआईभी एड्स परीक्षण तथा सेवा दिँदै आइरहेको बताए । चितवन एचआईभी संक्रमितको उपचार धेरै हुने देशकै ५ औं जिल्ला हो । एचआइभीको सम्भावित जोखिम समूहमा रहेकाले पिइपी औषधि लिन सक्ने छन् । बलात्कार वा अन्य असुरक्षित यौनसम्पर्कका कारण हुन सक्ने जोखिम कम गर्न ७२ घण्टाभित्र पीईपी औषधि लिन सुरु गर्नुपर्नेछ । यो औषधि २८ दिनसम्म सेवन गरे जोखिम कम गर्न सकिन्छ । चितवनमा पिइपी लिनेको संख्या १२ रहेको छ । चितवनमा एचआईभी संक्रमित भएका ३ सय ४२ जनाले स्वास्थ्य विमा गरेका छन् । देशभर सिडिफोर काउण्ट गर्ने ३३ वटा र भाइरल लोड परीक्षण गर्ने ८ ठाउँ छन् । देशभरी एआरटी सेन्टर ७८ वटा छन् । चितवनमा सन् २०११ देखि सन् २०२२ मार्चसम्म ए एचएफ नेपालको परियोजन सञ्चलित छ ।
चितवनमा विश्व एड्स दिवसको अवसर पारेर निःशुल्क एचआईभी परीक्षण अभियान चलाइने भएको छ । एआरटी सेन्टर भरतपुर अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय चितवन र भरतपुर महानगरको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा विश्व एड्स दिवसका कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । बिहीबारदेखि १६ गते मंगलबारसम्म अभियान सञ्चालन हुनेछन् । पुनस्र्थापना केन्द्र, मेघौली, चौबिसकोठी, अस्पताल क्षेत्रमा निःशुल्क परीक्षण अभियान सञ्चालन हुनेछ । डिसेम्बर १ अर्थात मंसिर १६ गते भरतपुर अस्पतालको चौतारी परिसरमा बिहान ८ बजेदेखि निःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा तीन महिना पछि कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउने तयारीपोखरा-गण्डकी प्रदेशमा तीन महिनापछि आगामी मार्च महिनामा